नियमित कागतिकव रस पानीको साथमा पिउनाले बिभिन्न रेगको लागि लाभ हुन्छ ~ Khabardari.com
नियमित कागतिकव रस पानीको साथमा पिउनाले बिभिन्न रेगको लागि लाभ हुन्छ
कागती हाम्रो घरमा हुनु नित्तान्त
आवश्यकछ । नियमित कागतिकव रस
पानीको साथमा पिउनाले बिभिन्न
रेगको लागि लाभ हुन्छ भनेर आयुर्वेदाचार्यहरु
सल्लाह दिनुहुन्छ ।
1. कागतिकी रसमा रहरको दाल पिसेर कपालमा दल्नाले कपाल झर्न बन्द हुन्छ ।
2. कागतिको रसले मात्रै कपाल धुनाले कपाल सफा हुन्छ ।
कागतिको रसमा चीनी मिसाएर कपाल केहि घण्टा पछि धुनाले चाँया नष्ट हुन्छ र
कपाल नरम हुन्छ ।
4. कागतिको रस १० ग्राममा सिधेनून मिसाएर १५ दिन नियमित सेवन गर्नाले पत्थरी रोगलाई
लाभ हुन्छ ।
5. राती सुत्ने बेला कागतिको आधा फक्लेटा अनुहारमा दल्ने र सुकाउने बिहान मनतातो पानीले
राम्रो असली साबुनले मुख धुनु डण्डीफोर र मुखको पोतो बेपत्ता हुन्छ
6. १० ग्राम कागतिको रसलाई १० गुणा अथवा एक १०० मिलीलिटर पानीमा पिउनाले
बोसो घट्छ ।
7. खाना खाई सकेपछ कम्तिमा एक वा आधा कागति नियमित सेवन गर्नाले बोसो निश्चित
8. कागतिको बोक्रा छोडाएर उसिनेर चीनीको चाश्नीमा हालेर मुरब्बा बनाउने । दैनिक एक मुरब्बा खानाले
रङ्गटा लाग्ने र पित्त बिकार सम्बन्धी रोगलाई लाभ हुन्छ ।
9. कागतिको रस चीसो पानीमा दिनमा ५।७ पटक एक एक सेवन गर्नाले रुघा चट हुन्छ ।
10. दाँत र मुखको शुद्धी गर्न
कागतिको रस पानीमा मिसाएर
जिभ्रोको मल ठिक हुन्छ
मुखको खटीरा गिजा सुन्निएको सन्चो हुन्छ
11. कागतिको रस मिसाएर नुहाउनाले छालाकव रङ्ग सफा हुन्छ र अरु छालाको रोगहरु पनि ठीक हुन्छ ।
12. पित्तलको भाँडा सफा गर्न पनि कागतिकव बोक्रा नूनमा मिसाएर दलेर सफा गर्ने दाग हराउँछ ।
13. चाँडै दही बनाउनु परेमा एक लिटर दुध पकाएर सेलाएपछि २० ग्राम कागतिको रस मिसाउने
५ मिनेटमा दहि जम्छ ।
14. कागतिको सुकेको बोक्रा धुलो बनाएर त्यस्को धुव गर्नाले वातावरण शुद्ध हुन्छ ।
15. कागतिको जराको रस १० ग्राम २५० मिली लिटर चौलानी पानीमा मिसाएर पिउने तीन दिन दुबैले पिएर सम्भोग गरेमा छोरा गर्भ रहन्छ ।
16. कागतिको नम्कीन बनाएर भोजनको साथमा रुचिकर हुन्छ । कागतिको दानालाई बोक्राको भाग ढुङ्गामा दलेर चिल्लो पार्ने त्यसपछि धुलो नून छर्केर दैनिक घाममा राखे केहि दिन पछि नून भित्र पसेर खाने हुन्छ ।पछि मुख धुने
अनुहारको चाँया पोतो ड्ण्डीफोरको लागि लाभदायक हुन्छ ।
गतिको प्रयोजन १२७ रोगको लागि लाभदायक हुन्छ भनेर कविराजहरु भन्नुहुन्छ ।